स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो - OSNepal
स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकियो
फाल्गुण १८, २०७७ मंगलवार १०:१२ बजे
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ । गएराति भएको खेलमा रियल म्याड्रिड रियल सोसिडाडसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको हो । सब्सिच्युट ब्राजिली युवा विङ्गर भिनिसियस जुनियरले खेल सकिन एक मिनेट बाँकी रहँदा गोल गरेपछि रियल म्याड्रिड जोगियो । सोसिडाडका क्रिस्टियन पोर्टुले गोल गरेका थिए । खेलको ५५औं मिनेटमा क्रिस्टियन पोर्टुले गोल गर्दै सोसिडाडलाई १–० को अग्रता दिलाए । ८९औं मिनेटमा सब्सिच्यट भिनिसियसले गोल गर्दै रियललाई खेलमा १–१ गोलको बराबरीमा ल्याए । उनी ६१औं मिनेटमा इस्कोको स्थानमा मैदान छिरेका थिए । यो बराबरीपछि रियलले दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको क्याटलान क्लब बार्सिलोनासँग समान ५३ अंक रहेपनि रियल गोल अन्तरमा पछि छ । रियल र बार्सिलोना एक खेल कम खेलेको शीर्षस्थानको एट्लेटिको म्याड्रिडसँग ५ अंकले पछि छ । रियल सोसिडाड २५ खेलबाट ४२ अंक जोडेर पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।
यो पनि : कहाँ हरायो फेवातालको १६ सय रोपनी जमिन ? :- दुई फरक प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल फरक पाइएको छ। वितेको आठ वर्षमा फेवातालको क्षेत्रफल १६ सय १९ रोपनी घटेको हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा पाइएको छ। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार हाल तालको क्षेत्रफल ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा छ । तर आठ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठन गरेको समितिले तालको क्षेत्रफल १२८७४–२–३ रोपनी रहेको ठहर गरेको थियो।
कास्की जिल्ला विकास समिति पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषदले फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल निर्धारण गरेको हो। फेवातालको करिव १६ सय रोपनी क्षेत्रफल नै हराउनु दुखद भएको विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन तर व्यक्तिले नापी गराएको जमिनलाई छोडिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ’, लामिछानेले भने, ‘यो निर्णयले जुन जमिन तालको नाममा ल्याउनु पर्थ्यो त्यो गुम्ने खतरा छ।’ याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।